Somaaliyeey! `` Colka waraf malagu dayay?`` - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Somaaliyeey! “ Colka waraf malagu dayay?“
Amni xumida waxaa ka dhashay horumar la’aan dhinac walba oo nolosha taabanaya sida dhaqaalaha, siyaasadda, iyo arrimaha bulshada.
Sida la wada ogyahay, jaahwareer badan kadib waxay beesha caalamku garowsatay in ay lagama maarmaan tahay in Somaliya loo dhiso haykal dowladeed si caalamku ugala xiriiro arrimaha somaliya. Waxay beesha caalamku Soomaaliya ku bixisay kharash aad u farabadan oo gaaraya balaayiin dollar. Lacagtasi waxaa loogu talogalay, sida qorshuhu ahaa, in lagu dhiso hay’adaha duwaliga ah si dadku u helaan adeegyo noloshooda wax ka badala, hoosna u dhiga geeddi- wadareedka ay dadku dalka kaga cararayaan.
Hase ahaatee hurumarka laga gaaray arimahaas waa kuwo aad iyo aad u yar. Waxaana la oran karaa xaalku aad ayuu u cakiranyahay, waaana lagama maarmaan in la raadiyo xal siyaasadeed oo baajin kara in dhiig kale sii qubto, la barakiciyo dad barmagaydo ah, Lana baabi’iyo hantida shacabka soomaaliyeed.
Beesha caalamku waxay Soomaalida ku wargalisay in ciidanka AMISOM baxayaan waqti aan dheerayn, mana muuqato in somalidu isu diyaarisay in ay la wareegto masu’uuliyadda amniga dalka. Iskabadaa in Somalidu amni la wareegtee, AMISOM ayaa baajisay in dhiig Ku daato ismariwaagii iyo xarig jiidkii dhexmaray xukuumadda iyo golaha shacabka, taasi oo muujisay dhicisnimada dowladnimada Soomaaliya.
Dadaaladaas waa in ay barbar socotaa in xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay garwaaqsato masu’uuliyadda sida gaarka ah uga saaran samatabixinta, ilaalinta , iyo iskuwadista danaha isdiidan ee dadka soomaaliyed, waana in maanka lagu hayaa in dadka soomaaliyeed yihiin isma hurto aan marna kala maarmi karin. Sidaasi si la mid ah waa in wakiilada shacabka eek a ra`yiga duwan golaha fulintu ka fogaadaan wixii sii adkayn kara xaalka cakiran ee dalku marayo ayna muujiyaan taxaddar dheeraad ah. Waana lagama maarmaan in wixii aan la huri doonin hadda la yeelo ee la dhuuxo oraahda soomaaliyeed “colka waraf malagu dayay?” oo dulucdeedu tahay in wax waliba oo suurogal ah la isku dayo si looga gudbo xaalka adag ee lagu jiro .